VaMugabe Voda Kutora Makambani ekuSwitzerland Mushure Mekunyimwa Mavhiza kweMakurukota Avo
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaGeorge Charamba, avo vanotaura vakamirira mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti mashoko aVaMugabe ekuti vachatsiva kunyimwa kwakaitwa mudzimai wavo nemamwe makurukota avo mavhiza nehurumende yeSwitzerland, wave mutemo weherumende.
Kunyange hazvo VaMugabe vakapihwa vhiza svondo rapera rekuenda kuSwiteralnd, vakabva varamwa kuenda vakatumira tsamba yenyunyuto kuUnited Nations vachiti vamwe vavo havaifanirwa kurambidzwa kuenda kumusangano weInternational Telecommunications Union sezvo wainge wakarongwa pasi peUnited Nations.
VaCharamba vanoti vakatosuma gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyiika, VaSimbarashe Mumbengegwi, pamwe negurukota rezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema, VaSaviour Kasukuwere, nezvedanho rekutora makambani evanhu vekuSwitzerland ari muZimbabwe.
Asi vamwe vari muhurumende yemubatanidzwa vanoti VaMugabe neZanu-PF vave kufunga kuti ivo ndivo hurumende uye mashoko aya haana nematuro ose.
Mutauriri wekambani inozivikanzwa zvakanyanya muZimbabwe ine zvizvarwa zveSwitzerland, yeNestle, Amai Brindah Chiniah, vanoti vangoverengawo mumapepanhau nezvekuda kutorwa kwemakambani ezvizvarwa zveSwiterland. Amai Chiniah vanoti havana mashoko akawanda ekutaura pamusoro pedanho riri kutorwa naVaMugabe sezvo vasati vasumwa zviri pamutemo.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvehupfumi muZanu-PF, VaTendai Savanhu, vanoti vanotsigira mashoko aVaCharamba.
Asi mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, vanoti zviri kutaurwa naVaCharamba hazvina kuropafadzwa nehurumende yemubatanidzwa.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Developmant Research Institute of Zimbabwe, VaGodfrey Kanyenze, vanoti Zimbabwe yave kuita chinya chegurwe chisingabatsire nyika.